isitshalo sokukhiqiza ukudla kwezinkukhu zemfuyo,isitshalo sokuphakelwa kwezilwane
1.I-Animal feed pellet line isethi ephelele yemishini esetshenziselwa ukwenza ama-pellets okuphakela.
2.Umthamo walesi sitshalo sokukhiqiza izinkukhu esingasukela 1 ton ngehora kuya 10 amathani ngehora.
3.Lapha, ungathola isitshalo se-pellet yezilwane ezithile zezilwane ezihlukile,kufaka nenkukhu,izinkomo,imvu,ingulube,idada,unogwaja, njalo njalo.
I-Animal feed pellet line isethi ephelele yemishini esetshenziselwa ukwenza ama-pellets okuphakela. Umthamo walesi sitshalo sokukhiqiza ukudla kwezinkukhu okungasukela ku-1ton ngehora kuya ku-10tons ngehora. Isitshalo sokukhiqiza imfuyo ngokuvamile kubandakanya inqubo elandelayo: izinto zokusetshenziswa ezithola inqubo yokuhlanza, inqubo yokuchoboza, inqubo yokuxuba, inqubo yokwenza i-pellet, inqubo yokupholisa i-pellet, (inqubo yokuqothuka kwe-pellet), inqubo yokuhluza.
izinkukhu feed line pellet application line: isetshenziswa ezitshalweni ezinkulu zembewu yokudla okusanhlamvu / ifektri yokudla / indawo yokulima; Umugqa wokukhiqizwa wokugaya wokudla wokugaya ofanele wokukhiqizwa okuphezulu nokukhiqizwa kwefometer ephezulu ye-automation.Full iqukethe i-crusher, ukuxuba, isigaxa se-pellet, opholile,crumbler,opholile nayo yonke imigqomo, isikrini,ukupakisha umshini wokuhambisa imishini njll. Sizokwakha ishadi eligcwele lokugeleza komugqa we-pellet ngokuya ngezinto zakho ezingavuthiwe kanye nemfuneko ethile.
Mayelana nesitshalo sethu sokukhiqiza izinkukhu
1.isitshalo sethu sokukhiqiza izinkukhu sinomkhawulo osebenzayo Ungacubungula izinto ezahlukene ezifana nommbila, ummbila, utshani, okusanhlamvu, I-SBM, MBM, alfalfa, molasses, utshani, nezinye izinto ezingavuthiwe.
2.Inqubo ephelele yokuphaka ama-feed e-feed e-Animal feed pellet plant iqukethe ukwamukela nokuhlanza, ukugaya, ukuhlangana nokuxuba, pelletizing,ukupholisa,ukushayeka ,ukuhlolwa nokupakisha izingxenye ze-pellets.
3.I-pellets yensiza enhle eseqediwe yokugcwalisa insimbi engagqwali yensimbi idlulisela isikhathi sokulungisa nesikhathi sokupheka. Imbobo yokufafaza enukayo yesikebhe, ukuthuthukisa ukusebenza kokupheka kokuphakelayo.
4.isitshalo sokudla se-pellet yezilwane sinemishini yokuphakela esebenza kahle ephezulu Ukunemba okuphezulu kokushayela okuphezulu kanye nomgodi we-pinion kuthatha ubuchwepheshe bokucima ukhuni kanye nobunzima bezinyo eliqinile, umphumela wokushayela obushelelezi, umsindo ophansi nempilo yenkonzo ende.
5.Ikhono Elenziwe: Singakwazi ukwenza ngezifiso amakhono ahlukile kusuka 1 ton ngehora kuya 50 ton ngehora noma nangaphezulu.
6.Izinhlobo ezahlukahlukene nosayizi wokuphakelwa Singasenza ngokwezifiso isixazululo sokukhiqiza i-mash feed, ukudla kwe-pellet, ukudla okuphakeme kuwe. Usayizi wokudla kwama-pellet ungaba ngu-1.5mm kuya ku-18mm.
Ukuhlela ukwakha isitshalo sokukhiqiza ukudla kwezilwane?singumenzi wokukhiqiza umugqa wezinkukhu onokwethenjelwa onamava weminyaka anganikeza ngqo lokho okufunayo! Lapha, ungathola isitshalo se-pellet yezilwane ezithile zezilwane ezihlukile, kufaka nezinkomo,inyama yenkukhu,imvu,ingulube,idada,unogwaja, njalo njalo.
Ngaphezu kwalokho, ukubhekelela izidingo ezikhethekile zamakhasimende ethu, futhi singakwazi ukwenza ngokwezifiso umugqa wokukhiqizwa wepelletry wezinkukhu ezihlukile,singanikeza umugqa wokukhiqiza izinkukhu wepelletry feed nge-1-2t / h,2-3t / h,3-5t / h,6-8t / h,ne-8-10t / h,noma yenza ngokwezifiso umthamo wokukhiqiza ngokwesidingo sakho.
Ividiyo yokukhiqizwa kokudla kwe-pelletry feed